Home > Products > Digital Printer > T shirt Printer > Digital A3 Flatbed T Shirt Printer
Iye zvino DIY iri kuuya, t shirt printer inowanzozivikanwa. Vashanduri vedu vane mishonga yakawanda itsva yakasiyana nevamwe. Isu tinoshandisa purogiramu yedijitori, yakananga inonzi scanning scanning, multi-position sensor uye yakakwirira zvakajeka zvikamu, kuve nechokwadi kuti printer performance inonyanya kugadzikana uye yakanyatsotarisa nzvimbo. The Dgt Printer T-Shirt inoshanda chete nekombiyuta imwe, T Shirt Printer Price iri kukwikwidza.
Digital T Shirt Printer Coth Yakatengeswa Bata Ikozvino